Umaki: isizukulwane esiholayo se-b2b | Martech Zone
Umaki: isizukulwane esiholayo se-b2b
Ungayikhiqiza Kanjani Imikhondo Engaphezulu Ye-B2B Okuqukethwe
NgoLwesine, July 23, 2015 NgoLwesibili, ngoJulayi 21, i-2015 Douglas Karr
UMkhandlu Omkhulu Wezokumaketha (i-CMO) umkhandlu wethule ucwaningo olusha olugxile ekutheni ukumaketha kungenza kanjani ngempumelelo ukuthengisa okuholayo kuholele ngokuqukethwe okuphoqayo kobuholi bomcabango - umsebenzi okhombise ukuthi uwumzabalazo wabakhangisi namuhla. Eqinisweni, ngabathengisi abangu-12% kuphela abakholelwa ukuthi banezinjini zokukhangisa ezinokusebenza okuphezulu okuhlelwe ngobuchule ukukhomba izethameli ezifanele ngokuqukethwe okufanele nokukholisayo. Ukwehluleka okuphezulu okuthinta inani lokulandiwe
I-MonsterConnect: Khokha Ithimba Lakho Lokuthengisa Ukuvala, Hhayi Ukudayela
NgoLwesine, July 2, 2015 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ngemuva kokusebenza ezinkampanini eziningi ze-SaaS ezinamaqembu athengisayo aphumayo, kwacaca ngokusobala ukuthi ukukhula kwenkampani kuncike kakhulu ekhonweni lethu labamele abathengisi bethu ukuvala ibhizinisi elisha. Akumangalisi nakancane ukuthi kube nokuhlangana okuphelele phakathi kwevolumu yezingcingo eziphumayo zabathengisi nezinga labo lokuthengisa elivaliwe. Uma lokho kukunikeza isithombe sengqondo sabathengisi abathile abakhuluma nethemba njalo ngama-30
Bengikhona emcimbini wokwethulwa kwamuva kwencwadi yokuphrinta kuphela ekhuluma ngesiko lokudla laseMidwest. Njengoba ngikhulume neqembu elidalile, bekukhona ukuziqhenya okumangazayo kokuqukethwe, ubuciko, nomkhiqizo ophelile. Umagazini bewuqinile futhi ubulizwa ikhwalithi yephepha, unuke okusha okubhaliwe, futhi ucishe ukunambitha ukudla okuchazwe kahle kangaka kumagazini. Kwangenza ngaqala
I-B2B Yokumaketha Komphakathi idinga ukusungulwa kobukhona negunya elikhulayo embonini yakho. Izinkampani ze-B2B ezisebenzisa isu elinolaka lokwakha ubukhona bazo kwi-inthanethi kuzo zonke izindlela zokuxhumana nabantu zaziwa njengabaholi abacabangayo futhi ukulandela kwabo kuletha ibhizinisi. Angivamile ukubona inkampani ye-B2B iqhuma ekukhuleni ngaphandle kokuba necebo lokumaketha umphakathi elikhona. Futhi ngibonile amabhizinisi amaningi e-B2B elwa kanzima ngoba engenawo. Amabhizinisi aqonda ukubaluleka kokungeza